အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က ဦးဆောင်မယ့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့မှာ အန်အယ်လ်ဒီပါတီဝင် ၄ဝ ရာခိုင်နှုန်း ဝန်းကျင်သာပါဝင်မှာဖြစ်ပြီး ၆ဝ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကို ပြင်ပပညာရှင်တွေနဲ့ တခြားပါတီက ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ခန့်အပ် မှာဖြစ်တယ်လို့ ပါတီရဲ့ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင် ဦးဝင်းထိန် က ပြောလိုက်ပါတယ်။
နေပြည်တော်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ နှင်းဆီစံအိမ်မှာ ဒီနေ့ ကျင်းပတဲ့ ပါတီ ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေ အစည်းအဝေးအပြီးမှာ ဦးဝင်းထိန်က သတင်းထောက်တွေကို ပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
"ကျနော်တို့ အခုပြည်ထောင်စုအဆင့်မှာ ပါမယ့်ဝန်ကြီးတွေရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံက ကျနော်တို့ NLD က ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်း ပါမယ်၊ ပညာရှင်တွေလည်းပါမယ်၊ တခြားပါတီတွေကလည်းပါမယ်၊ ကျနော်တို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဝင် ပြည်ထောင်စုအဆင့်ကလူတွေက လူနည်းစုတောင်ဖြစ်နိုင်တယ်၊ ၃ဝ ယောက်နဲ့ ၄ဝ ရာခိုင်နှုန်းကြားလောက် ပဲရှိမယ်၊ သမ္မတရုံးမှာ ဝန်ကြီးဌာန ၆ ခုရှိတယ်၊ အဲ့ဒီ ၆ ခုက ၁ ခုပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်၊ ၃ဝ ရှိတယ် ၂ဝ ပဲကျန်မယ်၊ တူတာတူတာရွေးမယ်၊ ဥပမာဆိုရင်ပေါ့ဗျာ ရထားပို့ဆောင်ရေး၊ ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေး၊ လေကြောင်း ပို့ဆောင်ရေး၊ ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ဒါတွေက ကျနော်တို့ တစ်ဖွဲ့တည်းလုပ်လို့ရတယ်၊ အဲ့လိုလုပ်နိုင်အောင် လည်း အရည်အချင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ကျနော်တို့ ရွေးထားပြီးပြီ"
လက်ရှိအစိုးရမှာ သမ္မတရုံးဝန်ကြီးဌာန ၆ ခု အပါအဝင် ဝန်ကြီးဌာနပေါင်း ၃၆ ခုရှိပြီး ဝန်ကြီး၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ၉ဝ ကျော်ရှိနေပါတယ်။ ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုမှာ ဒုတိယဝန်ကြီး ၂ ဦးနှုန်းနဲ့ ခန့်အပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
ဝန်ကြီး၊ ဒုတိယဝန်ကြီးတွေကို ရွေးချယ်ရာမှာလည်း စေတနာရှိတဲ့သူ၊ အရည်အချင်းရှိတဲ့သူနဲ့ အဂတိလိုက်စားမှု အနည်းဆုံးဖြစ်တဲ့သူတွေကို ရွေးချယ်မှာဖြစ်သလို နေရာတစ်နေရာအတွက် ပုဂ္ဂိုလ် သုံးလေးဦးအထိ လျာထား တယ်လို့လည်း ဦးဝင်းထိန်က ပြောပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ကောလာဟလ သတင်းတွေထွက်နေသလို အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် နာယက ဦးတင်ဦးကို သမ္မတအဖြစ် တင်မြှောက်မှာ မဟုတ်ကြောင်းလည်း ဦးဝင်းထိန်က ငြင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဒီကနေ့ အစည်းအဝေးကို ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက အသစ်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ အန်အယ်လ်ဒီပါတီ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ရဲ့ အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ ဦးဝင်းထိန်၊ ဦးဝင်းမြင့်၊ ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်၊ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ဝင် ဒေါက်တာမျိုးအောင်နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တို့ ၅ ဦးသာ ဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာ နိုင်ငံတော်သမ္မတ တာဝန်လွှဲပြောင်းရေး၊ အစိုးရဖွဲ့စည်းရေးနဲ့ ပြည်နယ်၊ တိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ခန့်အပ်ရေး ကိစ္စရပ်တွေကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတကို ရွေးချယ်နိုင်ဖို့အတွက် ဒုတိယသမ္မတလောင်း အမည်စာရင်း တင်သွင်းနိုင်ရေး ကိုယ်စားလှယ်အစုအဖွဲ့အလိုက် အစည်းအဝေးတွေကို လာမယ့် မတ်လ ၁ဝ ရက်နေ့မှာ စတင်ကျင်းပ မှာဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမတိုင်ခင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အစည်းအဝေးကို လာမယ့် မတ်လ ၆ ရက်မှာ ကျင်းပမယ်လို့ သိရပါတယ်။
Gen Min Aung Hlaing must respect majority of Burmese peoples' wishes. Majority of Burmese peoples have decided and they wanted Daw Aung San Su Kyi as their President at last Election. So Gen Min Aung Hlaing and Military must respect the election's result and accept Daw Aung San Su Kyi as President of Burma.
According to Gen Min Aung Hlaing, he wanted to be president of Burma.
How can peoples accept the man who can not keep his promised and does not respect wish of peoples of Burma?
If Gen Min Aung Hlaing wants to be president one day and then he must build up his reputation and show integrity to peoples of Burma.
President U Thein Sein and USDP Quasi Government have chanced to repair USDP and Military bad image but they throw away by increasing corruption and abusing power by Ministers and their children. The U Thein Sein Government’s ministers are rushing to transfer Government’s assets and contracts to their children and cronies own Companies.
Even more the unelected 25% of Military officers have objected call for to stop transferring Government assets to private own Companies. Unelected 25% of Military officers in Parliament are actually to protect former Generals and their children own Companies and not for the peoples of Burma or country.
If Gen Min Aung Hlaing and the Military do not respect the wish of Burmese peoples and they do not accept Daw Aung San Su Kyi as President of Burma and then peoples of Burma will not trust USDP and Gen Min Aung Hlaing won’t be president. He can only become coup leader.